Ya mere, ị nwere ya, 9 nzọụkwụ ziri ezi maka ịmepụta 2nd ego & melite azụmahịa n'ịntanetị.
Enwere m olileanya na ugbu a, ị nwere ike ịhụ na e nwere nzọụkwụ doro anya dị mkpa ịchọrọ iji dozie azụmahịa gị dị n'ịntanetị, ihe niile a emeela ọtụtụ puku ugboro tupu i nwee ike imeghachi ihe ndị ọzọ mere.
Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị mmadụ na-eme ihe na ụwa ịre ahịa ịntanetị kemgbe ọtụtụ afọ ma ha ga-ekwu maka ọnụọgụ ọnụọgụ ego buru ibu, ihe ịga nke ọma gị ga-elekwasị anya na ilekwasị anya na ịnweta ego mbụ nke $ 1.00 ma ọ bụ £ 1.00 ma ọ bụ € 1.00, wee jirizie nwayọọ nwayọọ na-eme ka ahịa gị dị elu. Nwere ike ịga n'ihu na -emepụta nnukwu ego buru ibu ma na-enwe ahụ ike ịnọ nwayọ yana obere ihe egwu.
Ka ị na -emebe ego ị na-akpata, ọrụ gị ga-adịkwu mfe; na mbido, inwere ike ịna-eme ọtụtụ ọrụ aka gị, ọ bụrụ na ha bụ ndị ọhụrụ nye gị ya, ụjọ ga-atụtụ gị na mbido, ị gaghị enwe ntụkwasị obi na nsonaazụ ga-esiri gị pụta. Echegbula banyere nke a ọ bụ ihe nkịtị, na ikwughachi ya ga-adị mfe karịa na ọ ga-abụ ọdịdị nke abụọ nye gị.
Ndị mmadụ sitere n'ụdị dị iche iche nke ndụ na ndị malitere obere ejirila aka ha wee bie nsogbu a. Naanị ihe ị ga - eme bụ ịgbaso nzọụkwụ ọ bụla guzobere ma detuo mmegharị nke ndị ọzọ na - eme, ọ bụrụ na ị ga - ejide ya, ị ga - ahụ mgbe ahịa malitere na ego na - abata.
Ihe ịga nke ọma gị ga-adabere na ilekwasị anya n'inweta gị
Akpa $ 1.00 ma ọ bụ £ 1.00 ma ọ bụ € 1.00!
Ozugbo i nwere ego, ị nwere ike itinye ego na nhazi mgbasa ozi buru ibu nke ga-enye gị mmụba na-emepụta ahịa na ịzụ ahịa na ị nwere ike ịmalite inyefe ndị ọrụ outsour na-enye gị ohere ịnweta ihe ị kachasị mma, nwee obi ụtọ ma nwekwuo nnwere onwe n'ime gị ụdị ndụ.
Enwere m olile anya na ị werela usoro ndị a tụrụ aro ka ị rụọ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị, mara ihe niile ịchọrọ iji mezue usoro niile dị n'okpuru.
Mmechi na ihe ndi ozo
Gị http://www.carlhenryglobal.com/resources maka ndụ na-ejikọta na Ngalaba niile anyị kwadoro.
“Ọ bụrụ na i mezuru usoro niile edepụtara n’elu, ị ga-eme karịa ọtụtụ ndị mmadụ nrọ ọ bụla ime ihe mgbe ịmalite azụmahịa na ntanetị! ”
Nke a bụ nanị nchịkọta nke isi ihe dị mkpa n'ihi na enwere usoro mmụta nke usoro ọhụụ na nghọta miri emi banyere mmepe weebụsaịtị, ịntanetị na njikarịcha nchọgharị.
Echefukwala isonye n’akwụkwọ akụkọ anyị ka anyị wee nwee ike idowe gị ọhụụ na ọzụzụ na-akwụghị ụgwọ site na eBooks na vidiyo.
Ndị otu n'efu - mmelite, Ngwaọrụ na Ọzụzụ
Iji kwado akwụkwọ anyị ekepụtala ndị otu na websaịtị anyị ka anyị nwee ike inye gị mmelite, ozokwa ọzụzụ, iji nye gị ngwa ọrụ na akụrụngwa - Nweta Ụmụaka Gị, Pịa ebe a ịnọgide na-ewu ma jikwa azụmahịa gị n'ịntanetị.
Dị ka m kwuru tupu ebumnobi bụ malite ebe ị nọ wee na-aga n'ihu na-eme ihe ndị dị mkpa n'ogologo ma ọ bụ obere kwa ụbọchị iji mee ka ị nweta oge zuru ezu n'ịntanetị.
Ọ ga-amasị m ịchọrọ gị ohere kachasị mma na ntanetị gị na ntanetị n'ikpeazụ iji cheta gị denye aha na listi nzipu ozi anyị ka anyị nwee ike iziga gị n'ihu nkọwa zuru ezu banyere akụkụ ụfọdụ nke ịmepụta azụmahịa gị n'ịntanetị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka chọpụta ọrụ anyị n'okpuru ịhụ otú anyị nwere ike isi nyere gị aka n'ịmechapụ ihe niile ma ọ bụ akụkụ nke ọrụ ahụ akọwapụtara.
Carl Henry - Onyeisi Carl Henry Global
Biko zigara ajụjụ niile, aro ma ọ bụ ajụjụ;